Ny teaser 'Chucky' Series dia mitondra ny saribakoly hiverina amin'ny fakany voalohany (mena)
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny teaser 'Chucky' Series dia mitondra ny saribakoly hiverina amin'ny fakany voalohany (mena)
Vaovao Mahafaly Fialam-bolySeries mahatsiravinaTranofiara (sarimihetsika)
by Timothy Rawles Jolay 16, 2021
Ireo maso manga ireo - mihomehy ilay sonia; ny tena izy Chucky dia miverina amin'ny andiany vaovao mitovy anarana amin'ny SYFY ary ilay teaser manaitaitra vao nilatsaka androany!
Ilay kilalao mpamono olona efa mahazatra dia mamely olona indray, ary eo amin'ny tontolon'ny horohoro dia vaovao lehibe nomena ny talenta rehetra ao ambadiky ny andiany; manana mpamorona tany am-piandohana Don Mancini sy ireo mpilalao sarimihetsika tiany indrindra – ny sasany dia miverina hatramin'ny voalohany. Anisan'izany i Jennifer Tilly, Fiona Dourif, Alex Vincent, Christine Elise, ary mazava ho azy fa ny feo ao ambadiky ny fihemorana Brad Dourif.
Mpikambana vaovao Lexa Doig (Jason X) sy Devon Sawa (Final destination) boribory ny mpilalao ho an'ny mpankafy vaovao.
"Ny mpilalao fototra dia zazalahy pelaka 14 taona izay nampijalina sy karazan'olona very taorian'ny nahafatesan'ny reniny vao tsy ela akory izay," Mancini nilaza tamin'ny EW. “Mpanakanto tanora izy [manao] sary sokitra misy ampahany amin'ny saribakoly. Nahita an'i Chucky tany am-pivarotana teo an-tokotany izy ary nividy azy, nefa hita fa nahazo mihoatra noho izay naloany izy. ”
Mancini dia niasa mafy tamin'ny famoronana andian-dahatsoratra na dia tamin'ny alàlan'ny areti-mandringana aza. Hita tamin'ity indray mitoraka ity fa mandefa ny aura tany am-boalohany ny franchise tamin'ny alàlan'ny fanomezana an'i Chucky sidekick tanora kokoa azy. Na dia tsy toy ny tany am-boalohany nilalaovan'i Chucky zazalahy enin-taona aza, dia niaro tena i Gen Z-er (Arthur) izay sahiran-tsaina.
Nanampy i Mancini: “Ny iray amin'ireo zavatra tiako hatao dia ny mamerina azy [ny franchise] Play Play Play fakany ary asaivo ho zaza ny mpihetsiketsika. Saingy satria, niaraka tamin'ireo sarimihetsika roa voalohany, dia efa niroso tamin'ny fananana ankizy kely aho, te hitady zavatra hafa, ka amin'ity indray mitoraka ity dia mijery tanora tanora izahay. ”
Teo koa i Teo Briones, Alyvia Alyn Lind, ary Björgvin Arnarson.
Raha heverinao fa mahazatra an'i Chucky, maso tsara! Ny lasitra ho an'ny saribakoly dia nalaina mivantana avy tao amin'ilay Lalao ho an'ny ankizy 2. Ity andiany vaovao ity dia hanao premiere amin'ny fantsona SYFY manomboka amin'ny 12 Oktobra 2021, ary hisy fizarana 8.
Mancini dia nilaza fa raha mahomby ny seho dia hisy fotoana hafa ho avy.
Topazo maso ny teaser etsy ambany ary araho hatrany ny iHorror raha te hahalala bebe kokoa momba an'ity andiana horohoro vaovao mahafinaritra ity.
Ny sary lohateny dia nalaina tao amin'ny EW.com.
'Fear Street Fizarana 3: 1666' dia mitondra ny Trilogy ho amin'ny farany mihozongozona sy mahafa-po
'The Empty Man' dia horonantsary mampihoron-koditra mahatsiravina
Browse Cateories Select Category Amazon (sarimihetsika) (7) Amazon (andiany) (11) AppleTV + (4) Blu Rays (8) Horohoro amin'ny hatsikana (48) Tantara an-tsary (13) Zavatra tsara hividianana (4) Facebook (andiany) (1) Angano (43) Rakitra hita (28) Gore (24) HBO (sarimihetsika) (6) HBO (andiany) (7) Boky mahatsiravina (58) Vaovao momba ny fialam-boly mahatsiravina (10,776) Sarimihetsika mahatsiravina (314) Horror Series (83) Subgenres mahatsiravina (10) Hulu (andiany) (5) Resadresaka nifanaovana (sarimihetsika) (38) Resadresaka nifanaovana (andiany) (4) Horohoro LGBTQ (42) Lisitry (sarimihetsika) (38) Lisitry (andiany) (2) Tsena (19) Monster Horror (9) Hevitra momba ny sarimihetsika (55) Sarimihetsika (14) Mozika (36) Netflix (sarimihetsika) (29) Netflix (andiany) (32) Tsy angano (4) Paranormal (75) Fampihorohoroana ara-tsaina (mampientanentana) (52) Famerenana andian-dahatsoratra (9) Shudder (sarimihetsika) (46) Shudder (andiany) (15) Slasher (4) Hafahafa sy tsy mahazatra (36) Sarimihetsika mivantana (78) Streaming Series (37) Kilalao (2) Tranofiara (sarimihetsika) (233) Tranofiara (andiany) (45) Heloka tena izy (46) Lalao video (181) YouTube (sarimihetsika) (3) YouTube (andiany) (11)
Ny Trilogy 'The Exorcist' 'an'i Blumhouse dia handaniam-bola ...
'The Exorcist': Ellen Burstyn manohitra ny andraikiny amin'ny ...
Navoaka talohan'ny praiminisitra aogositra ny tranofiara Red-Band 'Chapelwaite' ...
Andiany Zom-Com 'Andron'ny Maty' Mamoaka tranofiara, ...